पोर्टेबल डफेल यात्रा बैग
त्यहाँ जिम डफल ब्यागका धेरै शैलीहरू छन्, जस्तै ब्याकपैक्स, मेसेन्जर ब्याग, ह्यान्डब्यागहरू, आदि। सर्वप्रथम, तपाईंले स्पष्ट पार्नु पर्छ कि कुन शैली तपाईंलाई मनपर्दछ। सामान्यतया, पुरुषहरूले डबल काँधलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ, जुन बोक्नका लागि बढी सुविधाजनक हुन्छ।
टिकाऊ ठुलो साइजको यात्राका सामान डफ्ल ब्याग जुत्ताको डिब्बेको साथ
डफल भनेको के हो? डफल ब्याग, जसलाई ट्राभल ब्याग, लगेज ब्याग, जिम ब्याग पनि भनिन्छ, र यो अक्सफोर्ड, न्यान, पॉलिएस्टर र सिंथेटिक कपडाबाट बनेको छ। व्यक्तिहरू यसलाई नागरिकता द्वारा यात्रा, खेलकुद र मनोरन्जनको लागि प्रयोग गर्न मनपराउँदछन्।
पॉलिएस्टर सूट ब्याग
आजकल बजारमा धेरै महँगो सुटहरू छन्। कसरी महँगो सूट र कपडा सुरक्षित गर्न महत्त्वपूर्ण चीज हो। धेरै प्रख्यात ब्रान्डले सूट भण्डारण प्रक्रियाको बखत नयाँ सूट राख्न छनौट गर्दछ।
इको फ्रेंडली क्यानभास कपास गारमेन्ट सूट कभर
कपडा सूट कभर के हो? लुगा सूट कभर ब्याग व्यापार यात्रा वा यात्रा को लागी एक सामान्य वस्तु हो। सूट कभर एक नरम हो, जुन बोक्नको लागि डिजाइन गरिएको हो जुन सामान्य रूपमा ह्यान्जरमा राखिन्छ।
अधिक ठूलो नायलॉन लुन्ड्री ब्याग
यदि तपाईं एक भारी शुल्क र अतिरिक्त ठूलो लुगा धुने झोलाको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने, यो स्टाईल लुन्ड्री ब्याग तपाईंको लागि उपयुक्त छ। यस प्रकारको झोलाले २० देखि pieces० टुक्रा लुगा भण्डारण गर्न सक्दछ। शीर्ष डिजाइनले ड्रस्ट्रिring लक गर्दै छ, के तपाइँको लुगा धुने झोलामा राख्न सक्छ।
वाइन गैर बुना बैग
मदिरा पसलका लागि वाइन शपिंग ब्याग चाहिन्छ। सामान्यतया बोल्दा, यी स्टोरहरूले उज्यालो र chooseहरू छनौट गर्न सक्दछन्। त्यहाँ धेरै रंगहरू छनौट गर्न सकिन्छ। रंग बाहिर, तपाईं आफ्नो लोगो झोलामा छाप्न सक्नुहुन्छ। वाइन ब्याग गैर बुना, pp बुना, कपास र पॉलिएस्टर को लागी बनाउन सकिन्छ। यो धेरै गह्रौं र राम्रो गुण हो।
लन्ड्री ब्याग ब्याकप्याक
यो लुन्ड्री ब्याग ब्याकप्याक पॉलिस्टरबाट बनेको छ, जुन टिकाऊ र बलियो छ। यो वाटरप्रूफ र मेशीन धुने योग्य छ। प्रत्येक संयुक्त मा प्रबलित सिलाई यो पनीर सजीलो खुला छैन र थोरै अतिरिक्त वजन संग यातायात गर्न सजिलो छ कि छैन भनेर सुनिश्चित गर्दछ।
गैर बुनेको काँधको झोला एक प्रकारको शपिंग ब्याग हो। यो दैनिक प्रयोगको लागि उत्तम छ जुन तपाईंको निजीकृत लोगो, ब्रान्ड वा नारा सडक, विद्यालय, पार्क, सुपरमार्केटमा दैनिक फर्कन्छ। काँध पट्टा समायोज्य छ, कि यो काँध झोलाहरु को लागी जवान र पुरानो को उपयोग गर्न को लागी सम्भव बनाउँछ।
कागज किराना ब्याग धेरै वर्षदेखि इको फ्रेंडली ब्याग रहेको छ। धेरै पहिले, मानिसहरूले कपडा र जूट झोला सामान प्याक गर्न प्रयोग गर्थे। सानो सामानको लागि, खुद्रा विक्रेताहरूले कागजी झोलाको सामान सामान राख्न, जस्तै क्यान्डी स्टोर, विक्रेता, बेकर्स, र इत्यादि गर्न चाहन्छ।